Naya Bikalpa | काठमाडाैंमा केपी ओली पक्षकाे शक्ति प्रदर्शनः १६ ठाउँबाट जुलुस, ३ लाख कार्यकर्ता उतार्ने दावी ! - Naya Bikalpa काठमाडाैंमा केपी ओली पक्षकाे शक्ति प्रदर्शनः १६ ठाउँबाट जुलुस, ३ लाख कार्यकर्ता उतार्ने दावी ! - Naya Bikalpa
काठमाडाैंमा केपी ओली पक्षकाे शक्ति प्रदर्शनः १६ ठाउँबाट जुलुस, ३ लाख कार्यकर्ता उतार्ने दावी !
प्रकाशित मिती: २०७७ माघ २३, १२: ४६: ४७
काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानीका १६ स्थानबाट दरबारमार्गमा जुलुस एकीकृत गर्ने भएको छ।
स्वयंसेवक परिचालन कमिटीका अध्यक्ष महेश बस्नेतकाे नेतृत्वमा बिहान ११ बजेदेखि १६ वटै ठाउँबाट जुलुस निस्किँदैछ। ती सबै ठाउँबाट जुलुसमा आउने सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न दरबारमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ।
दिउँसो १ बजेसम्म जुलुस निस्किने हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने देखिएको छ। केशरमलदेखि दरबारमार्ग, जयनेपाल हलदेखि घन्टाघरसम्म सवारीसाधन आवत जावत राेकिएकाे छ । पुतलीसडक-शंकरदेव सडकमा सवारी साधनकाे लामाे लाइन लागेकाे छ ।
सभाका लागि तयार गरिएका तीन हजार स्वयंसेवक वाकिटाकीसहित परिचालन हुने ओलीपक्षले जनाएकाे छ । १६ वटै ठाउँबाट आउने जुलुस दरबारमार्गको चार लेन सडकमा बस्ने छ। आमसभाका मुख्य वक्ता प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छन्।
जुलुसमा तीन लाख जनसंख्या उतार्ने यो दावी गरिएकाे छ । बागबजारबाट सबै सम्पर्क मञ्चका सहभागीहरूको जुलुस निस्कदै छन् । प्रदर्शनीमार्गबाट युवा, विद्यार्थी, खेलकुद महासंघ र प्रेस संगठनका कार्यकर्ताहरूको जुलुस निस्कने जनाइएकाे छ ।
दरवारमार्गकाे महेन्द्र शालिकपूर्वबाट जनजाति महासंघ ,घन्टाघरबाट मुस्लिम समुदायक, नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालय अगाडि, त्रिपुरेश्वर,गौशालामा ,पुतलीसडक,लैनचौरमा, सोह्रखुट्टै, टेकु, वसन्तपुर, ज्ञानेश्वर, पुरानो बानेश्वरमा लगायतका स्थानबाट ठूलाे संख्यमा जुलुस निस्किने तयारी भइरहेकाे ओली पक्षिय नेताहरूले जनाएका छन् ।
२०७७ माघ २३, १२: ४६: ४७